5 Caan Film Places In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Caan Film Places In Europe
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo(Last Updated On: 25/01/2021)
Europe dhiiri fanaaniinta iyo filim oo dunida ku baahsan, sidaa darteed waa yaab ma laha in ay soo jiidata sameeyayaal film si isku mid ah! Baro 5 Caan Film Places in Europe iyo ballansan fasaxyada aad iyo hawlaha si aad naftaada quusin ee filimada aad ugu jeceshahay fasax u qummanaado Yurub Meelo tagidda Best.
Rail transport is the most environment friendly way to travel. Maqaalkani waxa la qoray si loo baro oo ku saabsan tareenka Travel oo waxaa looga dhigay by Save Tareen A jaban Tigidhada in Tareenku Website In Adduunka.
1. Caan Film Places In Europe: Notting Hill, London, UK
Xusuusnow Hugh bixiyaa indhaha buluuga ah ee filimka Notting Hill? Baro Notting Hill, mid ka mid ah London ugu meelo qurux badan iyo guriga si aad ugu quintessentially British Fadhi-com. ... qayb ka ugu fiican ee ku saabsan Notting Hill waa daawashada mid ka mid ah filimada this caawimo aan wax ka dhigi aad wax yar ka fiican dareemaan in wax badan waxaa ka mid ah ayaa laga duubay ee bartamaha London! Tani waxay ka dhigan tahay in aad booqan kartaa dad badan oo ka mid ah goobaha taariikhi ah ku cad filimka!
In goobaha furitaanka, Deeqaha Hugh qof, William Thacker Socon Suuqa Portobello Road ah. suuqa caanka ah ee dunida Tani waa booqashadii ah oo ku kacaya ma aha oo kaliya sababtoo ah waa mid ka mid ah Meelaha ugu halyeey filim Notting Hill, laakiin sababta oo ah suuqa laftiisa waa si fudud u qurux badan oo ay ka buuxaan waxyaabaha qadiimiga xoodan kaliya sugayaan in la helay.
Next, waxaan ku talinaynaa in aad madaxa ka weyn si ay Wills buugta, 142 Portobello Road. The dukaanka yar qurxoon leedahay Will filimada ah waxa uu ku yaalaa at 142 Portobello Road. Waqtiga filim, waxa uu ahaa dukaanka qadiim ah. maanta, cinwaanka hoy u tahay dukaanka kabaha. Waxaa la sheegay in u dhow dukaanka by magaca Safarka buugta The salaysan ee 13-15 Blenheim Close ahaa waxyoonay ee dukaanka filimada.
halyeey Tani 1,000 sano jir ah qalcaddii Dr Makumbe waa jecel yahay ka mid ah warshadaha filimka, taas oo aan sababta aan u tagi karo off our 5 Caan Film Goobaha liiska Europe. Waxaa ugu caansan sida meesha for Hogwarts ee Harry Potter. Alnwick Castle ma aha oo kaliya mid ka mid ah Daar wayn ugu weyn ee la deggan yahay ee England iyo 1,000 sano jir ah, laakiin sidoo kale waa wax ka mid ah xiddiga filim ay xaq u gaarka ah!
qalcaddii picturesque Tani waa mid ka mid ah ugu mid taariikhi ah ee Britain, isagoo u saftay sameeyey filim oo caan ah iyo bandhigyada TV-ga sida Elizabeth, Robin Hood: Prince of Tuug, ah Downton Abbey gaar ah Christmas, iyo doorka ugu caansan sida Hogwarts School of Sixirka iyo Wizardry in labada ugu horreeya Harry Potter filimada.
Waxay ahayd ku salaysan qalcaddii in Harry uu cashar ugu horeysay Quidditch (qalcaddii hadda ciidammadu tababarka broomstick bilaha xagaaga) iyo kaalinta meesha Weasleys ka duulaya shil Ford Anglia degay on maalinta koowaad ee dugsiga.
Marka laga soo tago heystaan ​​ay ku screens weyn iyo mid yar, qalcaddii heer sare ah ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay muddo dheer ah iyo taariikhda hodanka ah. Waxaa la dhisay hareeraha 1096 iyo waxa uu ku yaalaa ee gobolka Ingiriisi ah ee Northumberland. Maanta waa guriga u Duke of Northumberland iyo qoyskiisa iyo waa qalcaddii labaad ee ugu weyn Deganayn oo England ka dib markii Windsor Castle.
3. Caan Film Places In Europe: Hamlet, Dunnottar Castle, Scotland
Ilaa hadda sida Daar wayn tag, way adag tahay in la damacsan meel dheeraad ah oo fog iyo riwaayado ka badan Dunnottar. Waxaa laga yaabaa in la booska ugu kaymo ah oo dhan qalcado Scottish, this mid fadhiya on top of ay u saarney gabiga u gaar ah wadada si Aberdeen, difaacay on dhinacyada oo dhan by ciidamada ee dabeecadda. Waxaa kale oo dabcan caan u Waxyoon Princess Meridas guriga qoyska ee Disney Pixars Brave iyo Laab for Helsingør in Franco Zeffirellis Hamlet!
Saf meesha ay mid ka mid ah meel kasta ugu riwaayado iyo aad u hesho fursad ay ku faysteeyaan indhahaaga on qaar ka mid ah xeebaha ugu duwanyihiin ee Scotland. Wind xaaqan grassland, suuroowdo qarar, iyo hirarka xasuuqay oo dhan wada yimaado mid hortegi aad u taataabtay.
Dunnottar sidoo kale bixisaa fikrad difaaca qalcaddii oo uu leeyahay qiyaas wanaagsan halyeeyo iyo waxyaalaha qarsoon. Whigs yiri- on dhamaadka ka dhigi doonaa taagan timo doono kaniisadda (hadda burbursan) gubay by William Wallace.
Inkastoo Dunnottar sii kordhaya ee dadka, ma aha mid ka mid ah qalcado Scottish soocay. Plus, hab size ay aad si fudud ka fog dadkii badnaa ka heli kartaa oo wuxuu ku raaxaysan ay meel gaar ah ku dhowaad on adiga kuu gaar ah. Sidoo kale waa off ah stop kaamil on xeebta Angus ee Route, safarka wadada Scottish ah oo si dhab ah muuqaal dabiici ah.
4. la aasaasay, Paris, France
Marka aad ka fikirto Paris, France, waxaad si toos ah u malaynayso of Tower Eiffel. Iyo sababta ma uu doonaynin aad? Waxaa qurux badan, oo waa heer sare, laakiin waxaan oo dhan ma arag kun jeer in dhammaan karkan ah, boodhadhka, baayacmushtarkaagii iyo news photos tan iyo markii aan ku jiray kids. Laakiin waxaa jira wax run ahaantii ku qaboojiyo taagan kaliya dhagaxyo ah ku tuuraan ka Eiffel: buundada la billaabay.
Pont de Bir Hakeim waa buundo gudbaya River waxba reebin ee Paris. Dhisay in ka badan boqol sano ka hor iyo Lillaahi ugu adeegtaa sida dhibic isgoyska webiga si ay dadka deegaanka ah, laakiin 2010 waxa ay noqotay xiddig film run. Taasi waa marka Christopher Nolan yimid oo uu markabka, lugu daro Leonardo DiCaprio, Ellen Page, iyo Joseph Gordon Levitt.
In 2010 wax sixir dhacay buundada this. In goobaha furitaanka, Ellen Pages barto Ariadne qof sida loo dhiso riyooyin.
5. Caan Film Places In Europe: The Life iyo qurux, Arezzo, Italy
movie Tani weli jeex keenaya in aan indhaha markaan aan ka fekerin waxa ku saabsan. Waxaan daawaday filimka this caanka ah ee dugsiga sanado badan ka hor, oo marna waxa uu ka tagay xusuustaydu. Tani waa sababta aan si shaqsi ah u tegey inuu soo arkay this kaalinta filimka caanka ah! Roberto Benigni 1997 Oscar guusha La Vita e Bella (Nolosha waa qurux) waa masterpiece ah! Calan ee WWII, waxaa sheegayaa sheekada nin Yuhuudda Talyaani magacaabay Guido Orefice. Waxa uu la kulmay iyo dhaco jacayl Dora u qurux badan oo ay leeyihiin wiil, Joshua, wada.
Sheekadu waxay ku saabsan tahay qoyska Guidos iyo sida ay noloshooda heli diiday yeellay marka ay qaaday xerada fiirsashada ah. Inkasta oo ay jiraan, si ay hoy wiilkiisa ka jahli ku hareereysan uu, Guido weaves sheeko ah oo baahsan. Wakhtigooda xerada kaliya waa ciyaar. Duubay ee guud ahaan dhowr qaybood oo xuddun ee bilowga ah ee filimka, si kastaba ha ahaatee, waa magaalada qurxoon Tuscan of Arezzo.
Florence si Tareenadu Arezzo
Perugia in Tareenadu Arezzo
Bologna ilaa tigidhada Arezzo
Siena si Tareenadu Arezzo
Waxaad sidoo kale u diyaargarowga in download mid ka mid ah filimada kuwaas oo si aad u daawato ama awgeed qorshaynta safarka hore u, ma aad? Waa maxay sababta aan labada samayn! madax ka badan si ay u Save A tareenka oo jartaan tikidhka ah daqiiqo oo ay mid ka mid ah 5 Caan Film Places in Europe!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “5 Caan Film Places In Europe” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-film-spots-europe%2F – (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
europetravel filmplaces filimada filmspots trainjourney Tranride
Safarka tareenka, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani, Tareenka Safarka Switzerland, safarka Europe